आलुले तौल घटाउँछ ! तर कसरी ? – Janadesh Daily | ePaper
आलुले तौल घटाउँछ ! तर कसरी ?
उसिनेको आलुलाई बरफ राखेर चिसो बनाउँदा आलुको रेसिस्टेन्ट स्टार्च ९च्भकष्कतबलत क्तचबअज० को मात्रा कम हुन्छ । यस कारणले यो आलुले तौल बढ्न दिँदैन । साथै मेटाबोलिज्म तीव्र बनाउँछ र शरीरमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसोलाई कम गरिदिन्छ ।